Ububha buthwelwe kakhulu ngaboHlanga besifazane - Bayede News
Ubuphofu buyinselelo enkulu yentuthuko kwezenhlalo, ezomnotho kanye nakwezepolitiki, hhayi ezweni laseNingizimu Afrika kuphela kepha emhlabeni wonke osathuthuka. Okungabukeki kahle noma okuthanda ukuvela kabi ukuthi ubuphofu buhlasele kakhulu aboHlanga noma izindawo lapho kuhlala khona aboHlanga lapha eNingizimu Afrika. Ngokusho kwemininingo emisha ekhishwe ngabakwaStatsSA, ubuphofu busezingeni eliphezulu eNingizimu Afrika umbiko wePoverty Trends in South Africa ukhombisa ukuthi yize kwehla ubuphofu phakathi konyaka wezi-2006 nowezi-2011, kodwa amazinga obuphofu akhuphuka ngonyaka wezi-2015.
Babangaphezu kwesigamu abantu baseNingizimu Afrika ababe bhekene nobuphofu ngonyaka wezi-2015, kanti inani labantu ababebhekene nobuphofu landa laya kuma-55,5% lisuka kuma- 53,2% ngonyaka wezi-2011.
Umnotho waseNingizimu Afrika kule minyaka emihlanu edlule, ikakhulukazi phakathi konyaka wezi-2011 nowezi-2015, uqhutshwe yinhlanganisela yezinto zomhlaba wonke kanye nezasekhaya njengokukhula komnotho okuncane futhi obuthakathaka, ukuqhubeka kwamazinga okuntuleka kwemisebenzi, intengo ephansi yezimpahla, amanani entengo aphezulu (ngokwezifi so zamandla kanye nokudla), amazinga aphansi okutshala imali, ukuncika kwamakhaya amakhulu enkokhelweni yesikweletu nenqubomgomo.
Lesi sikhathi senze impilo yezimali zamakhaya eNingizimu Afrika zehla zaba ngaphansi kwezisindo zalezi zingcindezi eziqondiswe kwezomnotho, yabe seyidonse nemindeni eminingi kanye nabantu ebuphofi ni.
Amaqiniso amahlanu ngobuphofu eNingizimu Afrika ahlanganiswe kusetshenziswa iLiving Conditions Survey (LCS) aveze ukuthi; Cishe isigamu (49,2%) sabantu abadala sasiphila ngaphansi kwezingabubha okuthiwa i-Upper- Bound Poverty Line (UBPL)
Uma kubhekwa ubuphofo ngokobulili kusetshenziswa i-UBPL kuyavela ukuthi abantu besilisa abadala kanye nabantu besifazane abadala bathola amaphesenti angama-46,1 namaphesenti angama-52,0 ngokulandelana okubeka isithombe sokuthi abesifazane eNingizimui Afrika ngathi basalwembethe usizi.Ezifundazweni iGauteng kanye neWestern Cape kwavela ukuthi isibalo sabantu abadala abampofu siphansi.
Izifundazwe ezinamazinga aphezulu abantu abadala ababhekene nobophofu iseLimpopo (67,5%), i-Eastern Cape (67,3), iKwaZulu-Natal (60,7%) kanye naseNorth West (69,6%). IGauteng neWestern Cape babenengxenye ephansi yabantu abadala abampofu ngoba kwavela amaphesenti angama-29,3 kanye namaphesenti angama-33,2 ngokulandelana . Lokhu kuveza ukuthi ezindaweni lapho aboHlanga bengaphezulu kwamaphesenti angama-80 cishe isigamu noma bonke bahlaselwe ubuphofu ngoba kulezi zifundazwe ezinobuphofu obuphezulu aboHlanga bangamaphesenti angama-80 kuya phezulu.Imindeni eyayiphethwe ngabesifazane ikakhulukazi yayaziwa ubuphofu
Igebe lobuphofu nobukhulu bezindlela zobuphofu belilikhulu emindenini ephethwe ngabesifazane uma kuqhathaniswa nemizi ephethwe ngabesilisa. Ingxenye yabesifazane abaphila ngaphansi kwe-UBPL yayinghamaphesenti ali-16,9 ngaphezulu kwemizi ephethwe ngabesilisa (49,9% uma kuqhathaniswa nama-33,0%). Cishe emindenini eyishumi, eyisithupha iholwa ngabantu besilisa (59,3%) kube eyisikhombisa kweyishumi eholwa ngabesifazane (74,8%) ezindaweni zasemakhaya beziphila ngaphansi kwe- UBPLIzingane ezimpofu zazinamathuba amancane kakhulu okufi nyelela ezindaweni zokudlala eziphephile.
Ukuba nendawo yokudlala ephephile kubalulekile ekukhuleni kahle kwengane ngaphansi kwe-UBPL, ngaphezulu kwengxenye yezingane ezingezona ezihluphekayo (53,7%) zazihla ezindaweni ezinezindawo yokudlala ephephile kuqhathaniswa nengxenye eyodwa kwezine yezingane ezimpofu (25,7%). Imizi empofu eholwa ngabesifazane ibinokufi nyelela kokungcono kwezindlu nogesi kepha hhayi amanzi, ukuthuthwa kwendle kanye nezinsizakalo zokususwa kwemfucuza.
Cishe zingamama phesenti angama-91,4 emindeni ephethwe ngabesilisa enogesi ngokuqhathaniswa namaphesenti angama-95,2 emindeni ephethwe ngabesifazane. Emizini ephethwe ngabesifazane , abangama-69,6% bathola amanzi ngokugcwele uma kuqhathaniswa nabangama-71,1% bemindeni ephethwe ngabesilisa.
Lobu buphofu ezweni buphinde budalwe ukuntuleka kwamathuba emisebenzi eNingizimu Afrika njengoba ukuntuleka kwemisebenzi sekuhleli emaphesentini angama-29 okubeka ngokucacile ukuthi ubuphofu kuleli lizwe busazokwanda uma isimo semisebenzi singalungiswa kahle kulelizwe kakhulu kazi ngoba phela ubuphofu nokuntuleka kwamathuba omsebenzi kubhekene naboHlanga ngqo ngoba yibo abayingxenye enkulu kuleli lizwe futhi yibo abangabasafufusa ekutholene amandla amakhulu ngakwezimali ngenxa yobandlulule leli lizwe eliphuma kubo.
Ngesikhathi lapho amazinga obuphofu kungathi ayehla ukungalingani kona kuyakhuphuka kanye negebe phakathi kwabanakho nabangenakho kuya ngokukhula mihla namalanga.